Fandefasana finday avo lenta izay ho hitantsika amin'ny MWC 2019 | Androidsis
Inona avy ireo finday avo lenta ho tonga amin'ny MWC 2019?
Eder Ferreño | | Finday, MWC
Manomboka rahampitso miaraka amina andiam-panolorana ny MWC 2019. Marika maromaro no efa nikarakara hetsika fampisehoana, hahafantarana ny finday finday vaovao. Ity herinandro ity, ny mpandray anjara fototra dia ny Samsung Galaxy Fold, Telefaona mivalona voalohany an'ny Samsung. Ny marika Koreana dia naniry mialoha ny hetsika telephony any Barcelona amin'ity lafiny ity. Na dia amin'ity tranga ity aza dia afaka manantena maodely mivalona isika.
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia voamarina fa afaka manantena andian-dahatsoratra isika modely mamoritra amin'ity taona ity amin'ny Android. Na dia ho afaka hihaona amin'ny sasany amin'izy ireo aza isika amin'ity herinandro ity mandritra ny fankalazana ny MWC 2019. Ka ho hitantsika ny fomba fandikan'ny marika tsirairay an'io tsena io.
3 RUMOR: Xiaomi
Herinandro vitsivitsy lasa izay Huawei dia nanamafy ny fisiany tao amin'ny MWC 2019, miaraka amin'ny afisy azonao jerena amin'ity sary etsy ambony ity. Ao anatin'izany dia tiana hambara fa afaka manantena finday finday avo lenta isika izay hofehezin'ny marika Sinoa. Efa nolazainay anao andro vitsivitsy lasa izay Ny marika sinoa dia antenaina hiditra amin'ny sehatry ny finday avo lenta amin'ity hetsika any Barcelona ity. Ka izany no ho segondra toy izao.
Aza adino koa izany Ny fitaovana Huawei dia ho telefaona 5G voalohany ihany koa fa izy ireo dia hanolotra. Tsy misy isalasalana fa fahombiazana ho an'ny marika izany. Ankoatry ny famelana antsika modely mamoritra dia iray ihany koa io miaraka amin'ny 5G, izay antenaina fa hahazo tsena amin'ity taona ity.
Rahampitso alahady amin'ny 14:00 hariva Ho fantatsika izay nomanin'ny marika sinoa amin'ity fitaovana vaovao ity. Hetsika izay tsy ho taraintsika, ka holazainay aminao ny zavatra rehetra asehon'izy ireo amin'ity hetsika ity. Ny mazava dia ny fidiran'izy ireo ao amin'ny sehatry ny finday avo lenta miaraka amin'ity modely ity.
Nubia dia iray amin'ireo marika hafa izay dia nanamafy ny fisian'izy ireo tao amin'ny MWC 2019. Ankoatry ny iray hafa izay manana voamarina ny fidirana ao amin'ny sehatry ny telefaona mivalona. Hatramin'ny nanambaran'ny orinasa hetsika famelabelaran-kevitra, izay miaraka amin'ny anarana Flex Your Life. Ka mazava fa afaka manantena fitaovana iray hiondrika isika. Na dia momba ilay fitaovana aza dia misy data kely hatreto.
Satria ny marika dia manana patanty ho an'ny fitaovana iray izay finday avo lenta miendrika smartwatch, ka azo averina ho avo roa heny ho famantaranandro. Saingy tsy misy angon-drakitra momba izany na tsia ny vokatra hatolotr'izy ireo any Barcelona. Noho izany dia tsy maintsy miandry isika. Amin'ny anao, tsy misy daty manokana. Hainay ihany fa i Nubia dia ho ao amin'ny MWC 2019, saingy tsy manana hetsika voalahatra toy ny Huawei na Sony izy ireo, izay hanolorany ity fitaovana aforitra ity.
Xiaomi dia iray amin'ireo marika maro izay miasa amin'ny finday avo lenta. Ny marika sinoa dia efa namela antsika hahita amin'ny fomba patanty, mahatonga o Video ity fitaovana ity izay antenaina hanomboka amin'ny magazay amin'ity taona ity. Na dia tsy misy na inona na inona voamarina momba ny fampisehoana azy. Tao anatin'ny ora farany dia nisy ny haino aman-jery izay nilaza fa hanolotra azy ireo amin'ity hetsika ity miaraka amin'ny fampisehoana iraisam-pirenena ny Xiaomi Mi 9, efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity herinandro ity.
Noho izany, amin'izao fotoana izao dia tsaho tsy mbola voamarina. Na dia tsy misy fisalasalana aza, dia hamela ny hampitombo ny isan'ny maodely mivalona ao amin'ny MWC 2019, ankoatran'ny miteraka fahalianana lehibe. Satria mampanantena izy io fa ho fitaovana hafa tanteraka amin'ny marika ananan'ny hafa amin'ny fampandrosoana. Saingy tsy fantatray raha tena hiaraka amin'ity finday ity izy ireo rahampitso. Manantena izahay fa hanana fanamafisana mandritra ny ora vitsivitsy. Raha tsy izany, rahampitso dia ho afaka hamaha ny fisalasalana amin'ny fampisehoana nataonao izahay.
Iza amin'ireo finday azo ahodina ireo no andrandrainao indrindra amin'ny MWC 2019?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Inona avy ireo finday avo lenta ho tonga amin'ny MWC 2019?
Ny Realme 3 dia havoaka amin'ny fomba ofisialy amin'ny 4 martsa